केपी ओलीको भाषण रेकर्ड गरेर राख्नुहोला, म पनि खोजिरहेको छु : माधव नेपाल « रिपोर्टर्स नेपाल
केपी ओलीको भाषण रेकर्ड गरेर राख्नुहोला, म पनि खोजिरहेको छु : माधव नेपाल
काठमाडौं, १४ असार । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरुले कुनै व्यक्तिका विरुद्ध नभई व्यक्तिका प्रवृद्धिका विरुद्ध लडिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेता नेपालले नाम नलिईकन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्तिविरुद्ध लडेको बताएका हुन् ।
आज (सोमबार) विपक्षी गठबन्धनले पेशागत संगटनका प्रतिनिधिहरुसँग संसद् भवनको ल्होत्से हलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै नेता नेपालले यस्तो बताएका हुन् । उनले आजमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारीको ७०औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूहरुको बारेमा गरेको टिप्पणीप्रति चर्चा गरेका थिए । उनले ओलीको टिप्पणी सहि भए जनताको अदालतमा उभिन तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण रेकर्ड गरेर राख्न पनि भनेका छन् । केही दिनअघि नेता नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि केपी ओलीले प्रस्ताव गरेको बताएका थिए । नेता नेपालको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले आलोचना मात्रै गरेनन् ।
आफूले नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नको लागि के आफूलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र ? भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर नेता नेपालले भने,‘केपी ओलीका हिजो र आजका भाषणहरु ध्यान दिन लायक छन् । रेकर्ड गरेर राख्नुहोला, म पनि खोजिरहेको छु ।’
‘तोकिएका उमेर समूहलाई समयमै खोप दिनुपर्छ’ : डा. राजभण्डारी
काठमाडौं, १२ साउन । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालका पूर्व निर्देशक तथा सरूवा रोग
सरकारले वैज्ञानिकहरुको समन्वयमा कोरोना खोप नेपालमै उत्पादन गर्नतिर लाग्नुपर्छ : डा. पाण्डे
काठमाडौं, १२ साउन । डा.वासुदेव पाण्डेले कोरोना भाइरस लामो समय रहने भन्दै नेपालमै खोप उत्पादन
मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी, प्रदेश प्रमुखहरु हेरफेर हुँदै
काठमाडौं, १२ साउन । मन्त्रिपरिषद बैठक जारी छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकले प्रदेश
उच्च अदालत पाटनबाट पनि महरालाई सफाई
काठमाडौं, १२ साउन । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई उच्च अदालत पाटनले बलात्कार मुद्दाबाट सफाइ दिएको छ।
जसपाको कार्यकारिणी समिति बैठक जारी, ठाकुर पक्षलाई कारबाहीको तयारी
काठमाडौं, १२ साउन । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको कार्यकारिणी समिति बैठक जारी छ । पार्टी
माधव नेपालमाथि खनिईन् सांसद चौधरी, एउटा बराबर हैसियतको सांसदलाई निस्केर जा भन्ने ? (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १२ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) की सांसद गंगा चौधरीले माधव नेपालले